Mara MmaNwepu Iji Weghara Webpage Content In Five Minutes - Expert Semalt Expert
Ebere Mkpụrụ bụ ngwugwu Python nke eji eji akwụkwọ XML na HTML. Ọ na-eme osisi parse maka ibe weebụ ma dị maka Eke Ọgba 2 na Eke Ọgba 3. Ọ bụrụ na ị nwere mkpokọta weebụ nke a na-enweghị ike iwepu ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ịnwere ike iji atụmatụ dị mma BeautifulSoup. Ihe data a ga - enweta bụ ihe zuru ezu, nke a pụrụ ịdabere na ya, nke nwere ọtụtụ ntinye na ọdụ na ogologo okwu.
Dị ka BeautifulSoup, lxml nwere ike imejuputa na html. Parser modul adabara. Otu n'ime ihe kachasị iche iche nke asụsụ a na-emepụta bụ na ọ na-enye spam nchedo na nsonaazụ kachasị maka data oge. Abụọ lxml na BeautifulSoup dị mfe-ịmụta na inye ọrụ atọ dị mkpa: nhazi, ịkọ na ntughari mkpụrụ. Na nkuzi a, anyị ga-akụziri gị otu esi eji BeautifulSoup iji nweta ederede nke ibe weebụ.
Nzọụkwụ mbụ bụ ịwụnye BeautifulSoup 4 iji pip. Ngwa a na-arụ ọrụ na Python 2 na 3. BeautifulSoup na-agbakọta dị ka Eke Ọgba 2 koodu; na mgbe anyị jiri ya na Eke Ọgba 3, ọ na-eme ka ọ bụrụ nke a na-agbanye ọhụrụ na mbipute ọhụrụ, mana koodu anaghị emelite ma ọ bụrụ na anyị wụnye ngwugwu Python zuru ezu.
Ị nwere ike ịwụnye parser kwesịrị ekwesị, dị ka html5lib, lxml, na html. parser. Ọ bụrụ na ị wụnye pip, ị ga-ebubata site na bs4. Ọ bụrụ na ibudata isi iyi ahụ, ị ​​ga-ebubata site na ụlọ akwụkwọ Python. Biko cheta na lxml parser na-abata na nsụgharị abụọ: XML parser na HTML parser. Parser HTML adịghị arụ ọrụ nke ọma na nsụgharị ochie nke Eke Ọgba; ya mere, ịnwere ike ịwụnye Parser XML ma ọ bụrụ na parser HTML na-akwụsị ịzaghachi ma ọ bụ adịghị arụnye ya nke ọma. The lxml parser bụ ngwa ngwa na ngwa ngwa ma na-enye nsonaazụ ziri ezi.
Jiri BeautifulSoup iji nweta nkọwa
Na BeautifulSoup, ị nwere ike ịnweta nkwupụta nke ibe weebụ a chọrọ.A na-echekarị okwu na mpaghara Ikwu Ihe Akara ma jiri ya na-anọchite anya ọdịnaya weebụ weebụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Aha, Njikọ, na Isi okwu
I nwere ike iwepụ utu aha, njikọ, na isiokwu na BeautifulSoup.Naanị ị ga-enweta akararịrị nke ibe ahụ na koodu kapịrị ọnụ. Ozugbo enwetara akara ahụ, ị ​​nwere ike nyocha data site na isi na isi okwu.
Gaa na DOM
Anyị nwere ike ịnyagharịa site na osisi DOM na iji BeautifulSoup. Tags ịkọcha ihe ga-enyere anyị aka wepụ data maka ebumnuche SEO.
Ozugbo usoro a kọwara n'elu dịcha, ị ga-enwe ike ijide ihe odide weebụ dị mfe. Usoro ahụ dum agaghị ewe ihe karịrị nkeji ise ma kwe nkwa nsonaazụ ọma. Ọ bụrụ na ị na-achọ iwepụ data sitere na akwụkwọ HTML ma ọ bụ faịlụ PDF, mgbe ahụ, BeautifulSoup ma ọ bụ Python agaghị enyere gị aka. N'ọnọdụ ndị dị otú a, ị ga-anwale ihe nlekota HTML ma nyochaa akwụkwọ weebụ gị ngwa ngwa. I kwesiri iji ohere mara MmaSoup mee ihe iji weputa data maka ebumnuche SEO. Ọbụna ma ọ bụrụ na anyị na-ahọrọ parsers HTML nke lxml, anyị ka nwere ike iji uru nke nsonaazụ nkwado nke BeautifulSoup ma nwee ike nweta nsonaazụ ọma na nkeji nkeji Source .